Budada Methyltrienolone (965-93-5) Soosaarayaasha & Shirkadaha - Warshadaha
Budada Methyltrienolone waa mid ka mid ah steroids ugu fiican ee murqaha dillaaca. Methly trenbolone waa murqaha ugu sarreeya alaabooyinka. Metribolone waa mid ka mid ah steroids afka ugu awooda badan ee la soo saaro.
Qalabka Meat Methyltrienolone (965-93-5) video
Kalluunka Methyltrienolone budada (965-93-5) Sharaxaad
Kalluunka Methyl Methyltrenolone waa stomoid firfircoon oo afka laga qaato oo loo yaqaan '17α-alkylated nandrolone (19-nortestosterone). Looma iibin sidii daroogada dhakhtar qoro iyo cunto nafaqo leh sababtoo ah saameyntiisa iyo quwada adag ee adag iyo beerka sunta. Si kastaba ha noqotee, waxaa badanaa loo isticmaalaa sida tiirarka loo isticmaalo ee ficil-noolaha noolaha ee fiyroolojiga ee daraasadaha biochemical. Waxay si xoog leh ugu xiran kartaa qolka xajinta iyo qudaarta waxaana loo isticmaali karaa calaamad muujinaysa qalliinka cuncunka ee ku jirta qanjirka 'prostate' iyo burooyinka qanjirka 'prostatic'.
Cilmi-baaristu waxay muujisay in qaadashada steroid anabolic afka ah laga yaabo inay yareeyaan bioavailability. Tani waxay keenaysaa dabeecada qallafsan ee hormoonnada steroid, taas oo u oggolaan karta qaar ka mid ah daroogada in ay ku milmaan baruurta dufanka leh, oo yareeya nuugista nuuga mindhicirka. Isticmaalka ugu badnaan, budada Root Methyltrienolone waa in la qaato calool madhan.
Kalluunka Methyltrienolone budada (965-93-5) Smamnuucista
Product Name Kalluunka Methyltrienolone
Magaca Kiimikada METRIBOLONE; Methyltrienone; 17A-METHYL-TRENBOLONE; Metribolone; Methyltrenbolone (Metribolone)
brand NAme Kalluunka Methyltrienolone
Fasalka Daroogada Steroids; intermediates & kiimikooyin fiican; daawooyinka; taxanaha trenbolone
Molecular Wsideed 284.39
barafku Psaliid 170 °
Karkarinta Psaliid 485.9 ± 45.0 ° C ee 760 mmHg
Color iftiin jaalaha ah ilaa huruud
Kalluunka Methyltrienolone Application loo isticmaalo sida tixraaca tixraaca loogu talagalay ficil-noolaha noolaha ee fiyroolojiyada daraasadaha biochemical. Waxay si weyn ugu xiran kartaa qolka xajinta iyo quwadda waxaana loo isticmaali karaa calaamad muujinaysa qalliinka cuncunka ee ku jirta qanjirka 'prostate' iyo burooyinka qanjirka 'prostatic'.
Waa maxay budada Raw Methyltrienolone (965-93-5)?
Methyltrienolone waa mid ka mid ah steroids afka ugu xoogan ee abid la soo saaray. Wakiilkan waa nooc ka mid ah trenbolone (trienolone), kaas oo ahaa c-17 alpha alkylated si loo oggolaado maamulka afka. Isbeddelkani wuxuu abuuray steroid taas oo aad uga xoog badan ilma-adeer Awooddeeda ayaa lagu qiyaasay inay ka jirto meel kasta oo ka timaadda 120-300 ka weyn tan methyltestosterone, iyada oo kala-saarid weyn oo ka dhexeeya anabolic and androgenic effects. 535 536 Milligram ee milligaraam methyltrienolone waa steroid firfircoon firfircoon ka badan wixii wakiil kasta oo lagu iibiyo suuqa ganacsiga, oo u baahan qiyaaso sida yar .5-1 milligram maalintiiba si aad u aragto saameyn xoog leh oo anabolic ah. Awooddeeda waxaa keliya oo ay u dhigan tahay sunta sunta ah, si kastaba ha ahaatee, taas oo xaddidtay isticmaalka casriga ah ee cilmi-baarista shaybaarka kaliya.
Kalluunka Myltrienolone budada (965-93-5) wuxuu shaqeeyaa
Methyltrienolone, ka dib markii la taaban karo by asiidhaha caloosha waxay gaaraan soo dejiyeyaasha xajmiga iyo xoojin iyaga leh. Androgens ayaa asal ahaan ka soo jeeda labka dheddig-laboodka kuwaas oo mas'uul ka ah soo saarista saameynta anabolic. Ogow halkan in qalabka aasaasiga ah ee ka caawiya hormoonadani soo saaraan saameentooyinkaas anabolic waa xayawaanka androgen. Waxay kicinayaan unugyo badan oo keena kororka muruqyada iyo xoogga.
Testosterone (mid ka mid ah xeryaha badan) waa hormoon muhiim ah oo ka masuul ah koritaanka iyo dayactirka jirkaada. Qaboojiyeyaasha Androgen waxay hubiyaan in jidhku si haboon uga jawaab celiyo hormoonka qarsoodiga ah. Testosterone waxay ku xidhan tahay kuwa soo dhaweeyaa waxayna gaaraan unugyada muruqyada qalfoofka ah halkaasoo ay ka ciyaareyso doorka.
Methyltrienolone, oo si xoog leh ugu xiran qaboojiyeyaasha xayawaanka, waxay gacan ka geysataa joojinta saamaynta testosterone, taasoo fududeyneysa guulaha muruqyada iyo xoogga.
Khabiiradu waxay kugula talinayaan in aad qaadato qadar yar oo ah steroid anabolic. Qeybaha ugu wax ku oolka ah waxaa loo tixgeliyaa inay u dhexeeyaan 0.5mg ilaa 2mg. Qiyaasta waa in loo qaybiyaa qaybaha 3-4 iyada oo hal qaadasho laga qaadayo saacadaha 1.5 ka hor inta aan la qaban tababarka. Sidii hore loo soo sheegay, methyltrienolone waa daroogada aadka u xoogan oo aad u xadidan waxay sababi kartaa dhaawac halis ah caafimaadkaaga. Sidaa daraadeed, qadarkaaga hoos u dhigo iyo wareegyadaada gaaban. Muddada caadiga ah ee wareega methyltrienolone waa toddobaadka 6-8. Si kastaba ha noqotee, bilawga cusub, waxaa lagula talinayaa in la sii wado mudada wareegga ah sida gaaban 4 ama xitaa ka yar.
Cilmi baaris ayaa muujinaysa in qaadashada methyltrienolone ee cuntada ay yareyn karto bioavailability macnaheeduna wuxuu yareeyn karaa nuugista nafaqooyinka jirkaada. Cuntada dufanku ku yar yahay ee ka timaadda bioavailability oo hoos u dhacdey ayaa caqabad ku noqon doonta saameynta anabolic ee steroidkan. Sidaa daraadeed, si aad u hesho faa'iido badan, waxaanu kugula talineynaa inaad qaadato calool madhan.
Dufanka methyltrienolone budada ah (965-93-5) wuu isticmaalaa
Methyltrienolone waa mid ka mid ah steroids ee ugu xooggan ee leh faa'idooyin badan. Halkan waxaa ku qoran liistada faa'iidooyinka muhiimka ah ee aad la kulmi doonto markaad baaskiil wadato daawadan:
(1) Ma aha aromatise. Tani waxay ka dhigan tahay inuusan u badalin estrogen. Ogow halkan in estrogen uu yahay hormoon soo koraya naasaha, wuxuuna xakameynayaa wareegga caadada iyo dhalmada ee dheddigga. Sidaa daraadeed hormoonada u beddelaya estrogen waxay kuu horseedi kartaa ginecomastia ie naasaha waaweyn ee ragga. Waxaa intaa dheer, heerarka qiyaasta estrogen ee jirka ayaa sidoo kale keeni kara cudurada wadnaha iyo kansarka qanjirada. Laakiin uma baahnid inaad walwasho sababtoo ah markaad baaskiil wadata daawadan aad ka badbaado dhammaan tan maaddaama uusan u badalin estrogen.
(2) Maadaama uusan u beddelayn estrogen, wuxuu jirka ka ilaaliyaa isticmaalka biyaha isaga oo ka saaraya biyaha aan la rabin ee jirka. Sidaa darteed, waxaad u isticmaali kartaa xilliga cuntada ama inta aad isku diyaarineyso tartamada.
(3) Waxay si weyn u kordhisaa muruqyada adag. Tani waa wax aan dhammaan daawooyinka stabdhab anabolic awood u leh inay sameeyaan. Qaar badan oo ka mid ah steroids ayaa muujinaya korodhka weyn ee muruqyada, laakiin aad u yar ayaa keena murqaha muruqyada. Methyltrienolone waa mid ka mid ah steroid oo damaanad qaadaya muruqyada adkeysiga oo ku siinaya qaabdhismeedka jirkaaga si aad u xoogan.
(4) Waxaad ku soo kori doontaa korodh xoog leh oo xoog leh markaad baaskiil la sameynaysid steroidskan. Waxay ku caawin doontaa inta lagu jiro fadhiyada tababarkaada adoo kordhinaya bartaada iyo awoodaada. Sidaa darteed waxaad awoodi doontaa inaad ku tababarato waqti dheer iyo badanaa.
(5) Waxay kordhisaa dheecaanka. Ahaanshaha cayaaraha ama jir-dhisaha, waxaad hubaal ahaan dooneysaa in aad aragto calaamado muuqda oo aad u muuqda si aad u siisid muruqyadaada si ka badan.
(6) Waa mid aad u awood badan waana la barbardhigi karaa xanuunka 2 ilaa 3 xoog leh steroid afka ah oo isku xiga. Sidaa darteed, xitaa isticmaalka qiyaasaha yar yar waxay keenaysaa koror weyn oo ah murqaha iyo xoogga.
Soo iibso budada Methyltrienolone from Buyaas.com
dib u eegis 1 waayo, Dufanka methyltrienolone budada (965-93-5)
Sheyga METHYLTRIENOLONE waa mid aad u faa'iido leh.